Uchwepheshe we-Semalt: Indlela Yokulwa Nokuhlaselwa Kwe-Cyber ​​Malicious
Ekhulwini lama-21, ukuphepha kwamawebhusayithi kanye nezinhlelo zokusebenza zewebhu kuye kwabonakalakube ukukhathazeka okuyinhloko emhlabeni jikelele. Zonke izinkampani ezihlanganyela ekwenzeni ibhizinisi ngokusebenzisa ubuchwepheshe zithinteka kule nselele.Amanye amabhizinisi asevele ahlaselwa yi-Cyber ​​Attacks kanti amanye aqhubeka nokusebenza ezindaweni eziyingozi ezise-intanethi ezigcwelekwabaduni.
uFrank Abagnale, iMenenja yeMpumelelo yabaMakhasimende aphezulu i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ihlose ukuqaphela amabhizinisi e-intanethi ngendlela yokuvimbela ukuhlaselwa kwe-Cyber ​​kwezicelo zabo zewebhu noma amawebhusayithi. Ukwengeza,Amathiphu abalulekile inkampani engayenza ekuthuthukiseni izinyathelo zokuphepha zawo nayo igcizelelwe. Kulesi sixhumano, kubalulekileukuqonda ukuthi ngisho nezinkampani ezinkulu nezinyathelo ezingathinteka zingathinteka ukukhwabanisa. Ngokwesibonelo, u-Zamota wadutshulwa ekuqaleni konyaka,futhi ulwazi lwayo oluyimfihlo nolwazi lwayo oluyimfihlo lwasetshenziswe kabi ngabaduni. Ngakho ungavikela kanjani iwebhusayithi yakho kusuka ekuhlaselweni kwe-Cyber?
Okokuqala, sebenzisa izinhlelo zokusebenza olusha kanye nesofthiwe. Cishe bonke abanikazi bewebhusayithi banalowezwa nge-Magento, Joomla, ne-WordPress enokukhethwa kukho okuvuselela okudinga ukuchofoza kwenkinobho ukulanda noma ukufaka okwakamuvaama-plugin kanye nezinguqulo. Kule ndaba, abakhiqizi bewebhu nabasebenzisi baxwayiswa ngokukhetha ama-plugin aphansi aphansi kusukela abahlaseli bangase bakwazibaye babadala ngamabomu ngokuhloswe ekuqotheni amawebhusayithi. Imiphakathi ye-CMS (Content Management Systems) njengeWP (WordPress) futhiI-Magento isebenze kude kakhulu ukuvikela amasayithi. Ngaphezu kwalokho, lezi zindawo eziqhubekayo ziqhubeka nokukhulula izivikelo zokuphepha ezenza njaloamawebhusayithi aqinile kakhulu ekuvikelekeni kwe-intanethi..Enye yezindawo ezisengozini kakhulu isingatha ukuphathwa. Noma kunjalo, amabhizinisi ase-intanethi ayelulekwa ukubasebenzisa isisombululo sokusingatha esiphethwe. Inkampani yokusingatha inakekela izibuyekezo zokuphepha ngenkathi isebenzisa iphakheji. Ngakho, amabhizinisi angahlala njalouhlale uphephile kusuka ekuthungeni.
Ukuvikelwa kwephasiwedi nokuxwayisa yisinyathelo sesibili sokuphepha kumawebhusayithi. Onlineabasebenzisi kumele bakhulume futhi balondoloze amaphasiwedi aqinile akha izinhlamvu ezikhethekile, ama-alphabet, namanani ukuze kungabikho muntu ongawaqhafaza kalula.Kumanothi afanayo, abanikazi bamawebhusayithi nabasebenzisi bangakwazi ukufaka imikhiqizo ehambisana ne-Google evimbela ukuweba kwamaphasiwedi ngamanye ama-intanethiizinhlelo zokusebenza zewebhu noma amasayithi. Isibonelo, isiphequluli se-Chrome inikeza isandiso esibizwa ngokuthi "Iphasiwedi Alert", engalandwa futhiefakwe ngokukhululekile kuwo wonke umshini.
Okwesithathu, sebenzisa amathuluzi kusayithi elivimbela i-DDoS (Ukusakaza Ukukhishwa Kwezinsizakusebenza).I-DDoS iyindlela yokuhlaselwa yabahlaseli nabagaxekile ukuthumela imoto engafanele kwiwebsite ethize ngakho ukwenza okuqukethwe kwayo akutholakali.Inani elikhulu lomgwaqo okwenza isayithi lingatholakali lithunyelwa kusuka kwimithombo eminingi. Ngokuyinhloko, kuyingozi engenzeka kuzo zonke izinhleloemhlabeni wonke otheleleke futhi owenziwe yiTrojans nabahlaseli bahlose uhlelo olulodwa ngesikhathi. I-Google inomkhiqizo obizwa nge-GoogleShield Project ukuvikela amawebhusayithi amasha kusuka ekuhlaselweni okunonya kwe-DDoS. Le nsizakalo itholakale ukusetshenziswa mahhala ngamakamelo amancane e-inthanethi,amasayithi amasha, nezintatheli ezizimele.
Okokugcina, sebenzisa iseva ye-intanethi yokubamba iwebhu. Iseva ezinikezele iphephile nakakhulukunokwabelana ngewebhu web hosting nezindawo eziningana ngesikhathi. Ivimbela umnikazi wesayithi kusuka kubahlaseli abanonya abasebenzisa ukukhubazekaisayithi elilodwa ukuze likaHack yilelo elaligqokwe amanye amawebhusayithi abanjwe kuseva. Cabanga ngokusebenzisa amasevisi we-web hosting enikeza izibhamu zewebhu izibhamu zomliloamaseva wokusingatha.